TOP 10 Zig Ziglar Quotes Maka 2020 - Quedia Pedia
15 ruturu na okwu
Zig Ziglar bụ onye edemede, ọkà okwu na-akpali akpali yana onye na-ere ahịa. Ọ dị mma, ọ ma ama maka okwu mkpali ya, nke na-enyere ndị mmadụ aka ịgafe oge ihe isi ike ha. Ọzọkwa, site n'ike nke okwu ya, ọ na-akpali ọtụtụ mmadụ ịrụsi ọrụ ike na ndụ ha.
E wezuga ya, o bu otu n’ime ndi ahu jikọtara uzo nke Iso inzọ Kraịst n’okwu ya. Ọ dị mma, ọ na-ahụ maka ide ọtụtụ okwu mkpali, nke na-enyere ndị mmadụ aka ịga n'ihu na ndụ ha.
Ọzọkwa, ọ bụkwa onye ama ama ama ama ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke jere ozi na ndị Republican na America. Obi adighi anyi nma ebe o no n’etiti anyi. Ma nkuzi ya bụ ihe na-akpali akpali ọbụna n’ụbọchị ndị a.
Otu n’ime ndị a ma ama Zig Ziglar kwuru na ị ga-amararịrị bụ, "Ọ bụrụ na ị mụta site na mmeri, ị fughi efu." Ọfọn, ọ bụ ezigbo okwu dị mfe ma na-emetụta ihe ị ga-agafe. Nkwupụta a na-atụ aro ka ị mehie ihe gị ka ọ bụrụ ngwaọrụ maka ịga nke ọma.
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị mụta site na mmeri gị, ị gaghị ele ya anya dị ka mmeri gị zuru ezu. Ọ ga - enye gị nghọta bara uru ị nwere ike iso iji zere mmejọ n'ọdịnihu.
ọzọ Zig Ziglar see okwu nke ahụ ga - akpali gị bụ, “ccessga nke ọma abụghị ebe njedebe; ọ bụ njem. ” Nkwupụta a na-akọwa eziokwu ahụ bụ na njem gị na -arị njem gị dị mkpa karịa ebe ị na-aga n'ihi na ị ga-amụta ihe bara uru na ndụ gị site na njem gị.
Yabụ, ihe kachasị mma maka gị bụ ịbanye na usoro ahụ. Ma ọ bụ ihe ọzọ, ị ga-atụfu ịdị elu nke ndụ ma ọ bụrụ na ị ruru ebe ị na-aga. Gaghị enwe ihe ndị ọzọ ị ga-eme ozugbo ị mechara ihe mgbaru ọsọ gị. Mana, ọ bụrụ n’ịhụnanya gị na usoro a, ị ga - enweta mkpali ịmalite ọzọ.
Zig Ziglar edeela ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwuru, nke ị nwere ike ịlele. Throughgabiga ihe ndị ahụ ruturu ga - enyere gi aka ina ike na ndu.
O buru na imuta ihe site na mmeri, i ghaghi iko. - Zig Ziglar
Ndụ na-ewetara anyị ahụmịhe dị iche iche. Anyi adighi aghota ihe kpatara ihe niile emere. Mana…
Ihe ịga nke ọma abụghị njem, ọ bụ njem. - Zig Ziglar
Ndụ na-atọ anyị ụtọ n’ihi na anyị niile nwere nrọ dị iche iche. Ọ na-eme ka anyị nwee mkpali…
Iche echiche ziri ezi ga - enyere gị aka ime ihe niile ka echiche ọjọọ. - Zig Ziglar
Kwụsị ịtụ egwu ihe nwere ike imehie ihe ma bido inwe echiche ziri ezi banyere ihe ga-aga nke ọma. - Zig Ziglar
Ndụ nwere oke na elu yana eziokwu ahụ bara uru maka mmadụ niile. N'ihi ya,…
Kwesighi ịbụ onye ukwu ịmalite, mana ịkwesịrị ịmalite ịbụ onye ukwu. - Zig Ziglar
O nweghi onye ọbụla (ma gị onwe gị) nwetụrụ nrọ maka ịdị na-eto ma na-enweghị ike. Nwere ike mfe dina…
Ọ bụrụ na ị nwere ike nrọ ya, mgbe ahụ ị nwere ike nweta ya. - Zig Ziglar
Nrọ anyi na ochicho anyi na eme ka anyi na ndu. Ọ na-akpali anyị ịchụso ihe ịga nke ọma. Niile…
FEAR: nwere ihe abuo: ‘Chefue ihe nile ma gbara oso’ ma obu ‘Legharia ihe nile ma bilite.’ Nhọrọ bụ nke gị. - Zig Ziglar
You sị na ụjọ na-atụ gị ihe, ọ bụ naanị ihe masịrị gị. O nwere ike obu idi ka…
Ekwela ka njehie na ndakpọ olileanya nke ihe gara aga wee chịkwaa ọdịnihu gị. - Zig Ziglar
Okporo ụzọ siri ike na-edugakarị ebe ndị mara mma. - Zig Ziglar
Ndị mmadụ na-ekwukarị na mkpali anaghị adịte aka. Ọ dị mma, ịsa ahụ adịghị - ọ bụ ya mere anyị ji akwado ya kwa ụbọchị. - Zig Ziglar
Ndị mmadụ na-ekwukarị na mkpali anaghị adịte aka. Ehe, ịsa ahụ adịghị - ọ bụ ya mere anyị ji akwado ya kwa ụbọchị.…
A ga-enwe ndị ga na-emejọ gị mgbe niile. Gbalia ikele ha ekele maka ime ka odi ike. - Zig Ziglar
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ọtụtụ ndị gbara anyị gburugburu na-anọgide na-emeso anyị n'ụzọ na-adịghị mma. ……
Nke 3 C nke Ndụ: Nhọrọ, Ohere, Mgbanwe. I ghaghi ime nhọrọ iji were ohere ma ọ bụ na ndụ gị agaghị agbanwe. - Zig Ziglar
Odi nma, anyi nile na ebi ndu. Anyị na-eme ihe niile ka anyị nwee ike…
Ihe ị na - enweta site n’ị nweta ebumnuche gị adịghị mkpa ka ihe ị bụrụ site n’ihe ị ga - erite. - Zig Ziglar
Ọ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka anyị niile nwee nzube ná ndụ. Iji mezuo ebumnuche ahụ, anyị na-eme ihe niile…
Ekwela ka ndi mmadu ndi ojoo na aru ojoo kpopu ohere na isi gi. Welie ego ulo n ’ụlọ ma gbapụ ha. - Zig Ziglar
Ka anyị na-eje ije n’ụzọ nke ndụ anyị, anyị na ọtụtụ mmadụ na-emekọrịta ihe. Anyị na-ezute ndị ọhụrụ…
Mgbe i nwere okwukwe, olile anya na ihunanya, ị ga - azụlite ụmụ tozuru etozu n'ụwa ọjọọ. - Zig Ziglar
N'ụwa a jupụtara negativity na ndị mmadụ na gburugburu gị jupụtara ụdị nile nke pessimistic echiche,…